Xafiiska & Qalabka Dugsiyada Waxyaabaha Ku Saabsan iyo Sheekooyinka waxaa iska leh Alietc.com - Alietc.com
Baqshadaha Waraaqaha ah ee Loo Isticmaalo Maalinle
Waa maxay baqshad? Baqshaddu waa shay wax lagu duubo oo fudud, oo badanaa ka samaysan waxyaabo dhuuban oo fidsan. Waxaa ku jira shey fidsan sida warqad ama kaar. Waraaqaha baqshadaha dhaqameed waxay ku yimaadaan mid ka mid ah seddex qaab: rhombus, a cross-arm cross, or kite. Qaababkani waxay u oggolaanayaan dhismaha […]Read More
Immisa wadooyin ayaad adeegsan kartaa khariidadda is dhexgalka?
Waa maxay Khariidad? Khariidadu waa matalaad astaan ​​u ah astaamaha la xushay ee meel, badiyaa lagu sawiray dusha sare. Khariidaduhu waxay macluumaad ku saabsan adduunka si fudud u bixiyaan. Waxay wax ka baraan adduunka iyagoo muujinaya baaxadda iyo qaababka waddamada iyo masaafada u dhexeysa meelaha iyo astaamaha. Khariidado badan ayaa […]Read More
Bogagga hurdiga ah ee Ganacsiyada iyo Ururada
Waa Maxay Bogagga Jaallaha ah? Bogga jaalaha ah waa tusaha taleefanka ee meheradda, oo loo kala soocay qayb halkii magaca ganacsiga ah, oo xayeysiiska lagu iibinayo. Tilmaamaha waxaa markii hore lagu daabacay warqad jaalle ah, oo ka soo horjeedda bogagga cad ee liisaska aan ganacsiga ahayn. Ereyga soojireenka ah "bogagga huruudda ah" hadda wuxuu khuseeyaa ganacsiga qadkaRead More
Sideed U Qaybsan Kartaa Miiskaaga?
Qoraa ma tahay? Sidee miiskaaga loo abaabulaa? Hadday sidaas tahay, markaa waxaad joogtaa meesha saxda ah! Waxaad ka heli doontaa qoraalkan mid waxtar u leh siyaabo badan. Maxaad ka taqaanaa Hay'adda Miiska (Desk Organisation)? Sanduuq ama saxaarad furan, oo badanaa la dhigo dusha miiska, ayaa loo qaybiyaa qaybo xafiiska loo yaqaan […]Read More
Sida looga faa'iideysto dalabyada joornaalada ah
Waxaan jeclahay oo kaliya inaan ku jiifsado sariirta oo aan akhristo joornaal. Caadi ahaan waxaa ku jira maqaallo, sheekooyin, gabayo, iyo sawirro iyo sawirro isdaba joog ah. Majaladaha waxaa si joogto ah loogu daabacaa qorshaha maalinlaha ah waxaana ka mid ah […]Read More
Soosaarka Waraaqaha iyo Isticmaalka
Ujeedkeygu waa inaan ku qoro warqad waxa aan arko iyo waxa aan dareemayo sida ugu fiican uguna fudud. ”, Ernest Hemingway Waa maxay warqada? Waraaqdu waa shay khafiif ah oo ay ku qoran tahay ama ku daabacan tahay. Warqadda waxaa badanaa loo adeegsadaa qorista iyo daabacaadda. Waxaa sidoo kale loo isticmaalaa baakadaha alaabada. […]Read More
Isticmaalka hal-abuurka leh ee Stambber-ka
Waa maxay Shaabbadu? Shaabaddu waa farsamo ay kujirto khad (ka sameysan midab ama dheeh) lagu dhajiyay sawir ama qaab, kaas oo la sameeyay, la xardhay, ama laser lagu xardhay warqad caag ah Cinjirka ayaa badanaa ku dhegan shay aad u deggan sida alwaax iyo leben. Sii kordhaya, sawirka caagga ah ee ku soo biiray […]Read More
Sida loo adeegsado guddiyada ayaa u baddali kara baridda
Qeexida sabuurad Boodh waa qaab fidsan oo dhuuban oo afar gees ah oo alwaax ah ama balaastik ah oo loo isticmaali jiray fasalada, qolalka kulanka, iyo qolalka. Waxay ka samaysan tahay melamine, waxay u oggolaaneysaa calaamado aan joogto ahayn, guud ahaanna waxaa lagu dhejiyaa derbiga. Waa maxay sabuuraddu? Koodhadhka sabuuraddu waxay ka casrisan yihiin kaabitaankoodii hore, looxaanta. Sabuuradda ayaa ah mid aad u fiican […]Read More
Talooyin Ku Saabsan Soo Qaadashada Buugagga Soo Jiidashada leh
Waa maxay Daboolka Buuggu? Daboolida buuggu waa dabool difaac ah oo loo isticmaalo in lagu xidho bogagga buug. Daboolku waa wejiga buugga. Maaddaama wejigeennu muujin karo dareenkeenna gudaha, sidoo kale, daboolka buuggu wuxuu kaloo muujin karaa waxa ku jira buuggaas. Buugaagta buuggu waxay door ka ciyaaraan soo bandhigidda […]Read More
Maxay tahay sababta aan u isticmaalno Whiteboard Eraser
Waa maxay tirtiraha guddiga? Eraser loox waa nooc gaar ah oo masaxa oo loo isticmaalo in lagu tirtiro calaamadaha nuuradda ee ku dhagan rinjiga iyo sabuuradda. Badanaa waxaa laga sameeyaa silsilado la dareemay oo ku soo biiray maan-khaldan oo la abuuray. Gacan ku haynta ayaa ah muuqaal muuqaal leh. Ballaca xariijimaha ku xirma xamulka guud ahaan waa afar meelood meel kan […]Read More